Uchungechunge lwe-Smart Home
Uchungechunge olusheshayo lweDC
Case & Izindaba
DCM amandla uchungechunge amamojuli achazwayo yokuthuthukisa fast ukushaja okwenzeka izimoto kagesi. Nge design creative shape elihlakaniphile, amamojula amandla ukusebenzisa state-of-the-art ubuchwepheshe (Vienna + LLC), ethula inani imisebenzi odonsa phambili yasekuqaleni.
Amandla: 17KW / 20KW
Self-athuthukile amandla module
Ukuvikelwa Ibanga: IP20
Okuphansi energy ukusetshenziswa
Isiqinisekiso: iminyaka 1
Mode Ukulala abahlukile
Enkulumweni Stanby, le enery eyenziwe amandla module iyingxenye izindleko yokusebenza amashaja. DCM amandla uchungechunge amamojuli ukulawula amandla eceleni ngaphakathi 8W, futhi amandla imodi yokulala (ubuchwepheshe enelungelo lobunikazi) sincane ngisho kuka 2W, ukunciphisa kakhulu izindleko yokusebenza.
Mode Intelligent Parallel
High Ukuguqulwa Efficiency
Sekukonke lokushisa Monitoring
Temperature ukuqapha ngamaphuzu-8 ezifana temerature kuma, ukulawula DSP wesifunda, Amadivayisi amandla, amadivayisi kazibuthe nokunye, okuyinto ukuqinisekisa kakhulu operation esitebeleni onokwethenjelwa amandla module
Sebenzisa izakhiwo nokuphathelene ukuba stengthen ukuvikelwa amadivayisi Semiconductor. inqubo okuzenzakalelayo sishaye of emithathu okuhlola enamathela, ukuqina kuphele ukubekwa uphawu kwabangu core izingxenye, nokunye izinyathelo ukuqinisa denfenses umswakama, usawoti spray ukhunta.
MTBF> 100,000 Amahora
DSP isilawuli yedijithali ukunciphisa amadivayisi analog, professional ukushisa ukugeleza design ukwehlisa izinga lokushisa kuyanda, lempilo ende capacitors electrolytic futhi izingxenye brand international ukuqinisekisa ikhwalithi amandla amamojuli.
Wide wokufaka Voltage Ibanga
DCM amandla uchungechunge amamojuli babe voltage wokufaka kusukela 260Vac ukuba 470Vac, iyahambisana EV amamodeli we emazingeni ehlukene voltage, ukusekela ukukhokhiswa kokubili amabhasi kagesi sedans kagesi.
Wide Ukusebenza lokushisa Ibanga
Nge zokusebenza lokushisa kusuka -30 ° C ~ 75 ° C (Derating ngenhla 55 ° C), DCM sochungechunge lwamandla module umsebenzi ngokuphepha futhi enokwethenjelwa ekushibilikeni imvelo abandayo futhi kushisa.
DCM amandla uchungechunge module anokuvikela ezivamile ezifana Ukuvikelwa okokufaka overvoltage, okokufaka Ukuvikelwa undervoltage, Ukuvikelwa okukhipha overvoltage, okukhipha zamanje Ukuvikelwa umkhawulo, okukhipha Ukuvikelwa short circuit, phezu Ukuvikelwa lokushisa, futhi ongaphakeme Ukuvikelwa lokushisa. Iphinde ubamukela PFC ngiyontengantenga-by-wave zamanje Ukuvikelwa umkhawulo futhi LLC ingaphakathi resonant phezu lamanje ukuvikelwa (ubuchwepheshe lobunikazi), ukuhlinzeka okunokwethenjelwa bokusebenza for ukusebenza kwamandla amamojuli.
AC wokufaka Okuzisholo
Isigaba / Lines
3 Isigaba + PE
Ukulayisha Okugcwele Voltage
Imodi yokulala Amandla
≦ 3% (100% ukalwe okukhipha umthwalo)
≧ 0.99 (25% -100% okukhipha ukalwe umthwalo)
Ukuqalisa Inrush yamanje
DC okukhipha Okuzisholo
• Inhlalo engenayo inxushunxushu Voltage Ukunemba
• Inhlalo engenayo inxushunxushu Ukunemba yamanje
≦ ± 0.1A, Layisha zamanje <10A; ≦ ± 1%, Layisha zamanje ≧ 10A
Coefficient Peak <1%, RMS Coefficient <0.5%
≦ 5% (50% -100% Layisha)
Soft Isikhathi Sokuqala
Bo-3 ~ 8s
Kwabiwa Manual nokwabiwa othomathikhi
- 30 ° C ~ + 70 ° C (Derating ngenhla 55 ° C)
Ukulayisha Okugcwele Ukusebenza lokushisa
5% -95% ngaphandle ukufingqa
≦ 60dB (25 ° C ngo-380Vac, esigcwele umthwalo okukhipha)
Ngokuhamba / Ngaphansi ukuvikelwa voltage, lokukhipha Ukuvikelwa umkhawulo zamanje, lokukhipha Ukuvikelwa short circuit, yokwanda Ukuvikelwa, Kuka / Ngaphansi kwesivikelo lokushisa
Isitezi 2, Isakhiwo 6, No. 1026 Songbai Road, Isifunda saseNanshan, eShenzhen, China.
Wallbox IzE Fast Ishaja, Ev Dc Ukushaja Zokusebenzela , Type1 Socket Ev Charging Station, Universal USB Socket Ishaja , 10kw Portable Ev Charger, J1772 Plug Ev Charger, Zonke Imikhiqizo